Tanànan’ny zaridaina | Hevitra MPANOHARIANA
2007-06-22 @ 08:58 in Andavanandro
Miaiky tanteraka aho fa tena mitondra fahafinaretana tokoa ny tanàna iray voaravaka voninkazo. Ny trano kelikely feno sy tsara ravaka voninkazo no manintona kokoa noho ny trano lehibe tsy ahitana zavamaniry mihitsy na dia meva aza ny endriny sy ny bikany. Amin’izao fotoana izao dia mihabetsaka tokoa ny zaridaina eto Antananarivo no hitoetra amin’izay anarana mahazaridaina azy izay : ho voaravaka voninkazo. Izay mandalo eto andrenivohitra dia tsy hisy afaka handa io fivoarana io.
Efa nosoratako tany an-toeran-kafa fa efa misy rano mifantsitsitra (jet d’eau) mandrakariva eo amin’ny tsangambaton’ny mpitolona 1947 eo Ambohijatovo. Mbola ivaiva ihany ny fitondrahan’ny rano amin’io toerana io aloha na dia mandeha foana aza izy hatramin’izao. Amin’izao fotoana izao dia noesorin’ny Kaominina ny tsangambaton’i Karl Marx eo amin’ny fihodidinana anoloan’ny Antenimieran-doholona Anosy ary eo ampanamboarana toerana hisiana rano mifantsintsitra tsaratsara kokoa sy lehibe ry zareo. Noheverina hovitaina alohan’ny fetim-pirenena izy io nefa toa tsy ho tratra raha ny fijery azy. Mandroso ny asa na dia izany aza.
Fa miresaka eo Anosy ihany isika dia mba manontany ny olona aho hoe inona no maha-cité des jardins ny cité des jardins eo Anosy Mahamasina io ? fa na tanora eny fa na olondehibe aza toa tsy mahalala ny antony loatra. Izaho ihany koa dia tsy mahalala loatra. Ny hany tadidiko dia izao : tamin’ny andron’ny fanjanahantany dia zaridaina fotsiny no nandravaka iny faritra Anosy sy Mahamasina iny, indrindra fa amin’ilay lalankely mankeny amin’ny anjely mainty efa mihamanja iny. Iny lalankely iny raha ny marina dia toy ny hoe nihalava indroa noho ny taloha. Izany hoe amin’izao fotoana izao dia lasa difotry ny rano na nietry anaty rano ny atsasaky zaridaina fipetrapetrahan’ny vazaha teny. Zaridaina daholo iny tamin’ny andron’ny fanjanahantany hany ka rehefa nasiana fananganan-trano ho an’ny olona ambony tamin’iny toerana iny dia voahosotra ho cité des jardins ireo trano maromaro naorina mbola hitantsika amin’izao fotoana ireo. Aza manontany ny daty nananganana ny trano amiko fa tsy fantatro izany.